Sarkaal al-Shabaab u qaabilsanaa xog raadinta oo lagu qabtay howlgal ka dhacay deegaanka… – Hagaag.com
Sarkaal al-Shabaab u qaabilsanaa xog raadinta oo lagu qabtay howlgal ka dhacay deegaanka…
Saraakiisha Ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegay in howlgal sida wadajir ah u wada qabteen Ciidamada xoogga iyo kuwa Jubbaland ay ku soo qabteen Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab.
Howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni oo difaacyo ku leeyihiin ciidanka, waxaana ninka la qabtay la sheegay inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa xog raadinta.
Ninkan la soo bandhigay ayaa lagu magacaabaa Ibraahim Lujende Maxamed oo ka tirsan qeybta Jabhadaha ee weerarada ku qaada xeryaha ciidamada, waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa dagaalamayaashii Al-Shabaab ee ka qeyb galay weerarkii Ceel Cadde ee Gobolka Gedo oo dhacay sanadkii 2015 ee lagu galay xero Ciidamada Kenya, laguna dilay boqolaal askari.
Sidoo kale ninkan ayaa la sheegay inuu Al-Shabaab muddo 10 sano ka tirsanaa, waxaana xilliga la soo bandhigayay uu ahaa nin fikirkiisa aan la gamban oo Ciidamada iyo Saraakiisha soo bandhigay ku sheegay inay Riddoobeen.
Marka laga soo tago sheegashada Saraakiisha Ciidamada dowladda, ma jirto illaa iyo hada wax war ah oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab, waxaana inta badan Shabaabka ka gaabsadaan weerarada cirka iyo howlgalada ka dhaca deegaanada ay maamulaan.